CAR/EAR | KBZ MS
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ/တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ
၁) CAR ပေါ်လစီအောက်တွင် မည်သည့်အရာများကို အာမခံထားနိုင်သလဲ?
•	ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ အဆောက်အဦး/ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုပ်ငန်းလမ်းများ
၂) EAR ပေါ်လစီအောက်တွင် မည်သည့်အရာများ အာမခံ ထားနိုင်သလဲ?
•	လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းများကဲ့သို့သော
က) ခလုတ်ဂီယာများ တပ်ဆင်ခြင်း
ခ) ဆိုလာပြား တပ်ဆင်ခြင်း
ဂ) စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း
၃) အဓိက အကျုံးဝင်သော အာမခံ အကာအကွယ်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	မီး၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ လေယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ခိုးယူမှုများ ( အကြမ်းဖက်မှုနှင့်/ သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ် ဝင်ရောက်မှုသာ)၊ လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခြင်း၊ ဟာရီကိန်း၊ ဆိုင်ကလုန်း၊ တိုင်ဖွန်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းစသဖြင့်
၄) အဓိက အကျုံးမဝင်သော အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	စစ်ပွဲနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး အန္တရာယ်များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
•	Sanction ကန့်သတ်ချက်
•	ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်၊ မှားယွင်းသောလက်ရာ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုများ
•	ရေဒီယိုသတ္တုကြွ ညစ်ညမ်းမှု၊ ဓာတု၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဇီဝဓာတုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လက်နက်များကြောင့် ပျက်စီးမှုများ
•	ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများပြီးနောက် ဆုံးရှုံးမှုများ
•	COVID 19 ကဲ့သို့သော ကူးစက်ရောဂါများကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများ
၅) ) အပိုအန္တရာယ် အကာအကွယ်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏ စည်းကမ်းချက်များတွင်
က) တောင်းဆိုမှုများအပေါ် ဆုံးရှုံးမှုခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အစားထိုးရန်အတွက် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်
ခ) ဆိုက်ပြင်ပ (သိုလှောင်ခြင်း/ ဖန်တီးမှု) ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အစားထိုးရန်အတွက် ဆိုက်ပြင်ပတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အကျုံးဝင်သည်။
ဂ) ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို အစားထိုးရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ခအတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်များ
ဃ) အချိန်ပို၊ ညအလုပ်၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် အမြန် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခအတွက် အပိုအခကြေးငွေများ၊ မျှော်မှန်းကာလအတွင်း ပြီးမြောက်စေရန် အချိန်ပို၊ ညအလုပ်၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်နှင့် အမြန်သယ်ယူခအတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက် လျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း။
င) တိုးချဲ့ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုကာလနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများအတွက် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်။
စ) မှတ်တမ်းများအား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
ဆ) ယာယီ အဆောက်အအုံများအတွက် အကာအကွယ်။ လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုတွင် ယာယီ သိုလှောင်ရုံအတွက် စီစဉ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်။
•	Third Party Liability အကာအကွယ်တွင်
က) cross liability အတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
၆) မည်သူတွေ အာမခံထားနိုင်သလဲ?
•	အဓိကပိုင်ရှင်၊ ပင်မကန်ထရိုက်တာ၊ တဆင့် ကန်ထရိုက်တာ
၇) အာမခံ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
•	စာချုပ်ကာလနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကာလ
၈) ပရီမီယံကြေးက ဘယ်လောက်လဲ?
•	အန္တရာယ်ရှိသော တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ၊ လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ပုံ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၉) ပရီမီယံပေးချေရမည့် စနစ်က ဘာလဲ?
•	တစ်ကြိမ်တည်း ပေးချေရမည့် စနစ်
၁၀) အာမခံ ဝယ်ယူရန် မည်သည့်အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသလဲ?
•	ဆောက်လုပ်သည့်ကန်ထရိုက်တာနှင့် ငှားရမ်းသူပိုင်ရှင်အကြား သဘောတူစာချုပ်
•	တည်နေရာနှင့် ဆိုက်အစီအစဉ် (တတိယပါတီ ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း အသေးစိတ်များ)
•	စာချုပ်တန်ဖိုးနှင့် ၎င်း၏ ကွဲလွဲမှု
•	စာချုပ်ကာလ (ပုံစံပြကားချပ်/ပရောဂျက်အချိန်ဇယား)
•	အခြေခံအာမခံလိုအပ်ချက် (ပရောဂျက်စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း)
•	လွန်ခဲ့သည့်3နှစ်အတွက် အသေးစိတ် လျော်ကြေးအတွေ့အကြုံ
•	တူးဖော်ခြင်း/တူးဖော်ခြင်းအသေးစိတ်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ (မြေအောက်လုပ်ငန်းများပါဝင်ပါက)
•	ဆိုက်ဧရိယာ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦးဧရိယာ အပြင်အဆင်
•	အာမခံထားသော ပစ္စည်းအသေးစိတ် (ပစ္စည်း၏ အာမခံငွေနှင့် အသေးစိတ်စာရင်း) စသည်တို့။
1) What can be insured under CAR policy?
Structural and Civil Engineering Building/Renovation Work Roads
2) What can be insured under EAR policy?
Electrical and Mechanical Equipment Installation such as
a) installation of switch gear
b) installation of solar panel
c) erection of machines
3) What are the major risks covered?
Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Damage and Malicious Damage Impact Damage, Theft (Violent and/or Forcibly Entry Only), Windstorm, Hurricane, Cyclone, Typhoon, Flood, Earthquake, etc.
4) What are the major risks excluded?
Political risks and after effect such as War and Terrorism
The cost of rectifying materials, faulty workmanship or design
Damages after institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons
Loss after cyber security and technological failure
Loss due to Infectious diseases such as Covid-19
5) What are the additional coverages?
In terms of Material Damage
a) Property in transit, Coverage of property in transit in order to replace the loss or damage upon claim.
b) Off-site(storage/fabrication) Coverage for the property which is stored off-site in order to replace the loss or damage upon claim.
c) Extra charges for airfreight Cost of airfreight charges in order to carry out the construction materials to replace the loss or damage upon claim.
d) Extra charges for overtime, night work, work on public holidays and express freight. Extra cost for the overtime, night work, work on public holidays and express freight in order to complete within the expected period upon claim.
e) Extended maintenance period Loss or damage in the maintenance visit in construction period and maintenance period
f) Recompiling records and claim preparation Cost of Recompiling records and claim preparation upon claim.
g) Cover for temporary facilities. Cost to arrange for temporary storage facility upon claim.
In terms of Third-Party Liability
a) Cover for cross liability
6) Who can be insured?
Principal owner/ Main contractor/ Sub contractor
7) What is the period of insurance?
Contract period plus maintenance period
8) What are the premium rates?
It would be considered according to the risk location, nature of business, security management, firefighting system establishment etc.,
9) What is the premium payment type?
10) What information is required to get insurance?
Location and site plan (details surrounding third party properties)
Contract value and its breakdown
Contract period (bar chart/ project schedule)
Principal’s insurance requirement (as stated in the project contract)
Detailed claims experience for past3years
Piling/ Excavation details and Soil Report (if underground works are involved)
Site area or building area layout
Detail of insured property (sum insured of the property and breakdown) etc.